Gudoomiyaha Warsheekh oo Koormeeeray Goobaha Adeegyada Bulshada lagu Bixiyo – GEELLE MAG
Gudoomiyaha Warsheekh oo Koormeeeray Goobaha Adeegyada Bulshada lagu Bixiyo
Gudoomiyaha Degmada Warshiikh ee Gobolka Shabeelaha dhexe Xasan Maxamed Axmed oo la-hadley warbaahinta ayaa faahfaahiyey shaqooyin kala duwan oo degmadaas ka socda.
Waxaa uu sheegey in uu koormeer shaqo ku tagay qeybo badan oo degmada ah, waxaana uu tilmaamay in ugu horeyn ay booqdeen Cisbitaalka guud ee degmada kaas oo dhismahiisa iska kaashadeen Jaaliyadada ka soo jeeda deegaanka iyo shacabka degmada Warsheekh.
Waxaa uu intaas ku daray in ay booqdeen qaybaha kala duwan ee Isbitalka iyagoona Maamulka iyo Shaqaalahaba ku amaanay sida hufan ee dadka ugu adeegayaan.
Gudoomiyaha ayaa sidoo waxaa uu sheegay in koormeerkiisa ay ku wehlinyayeen qaar ka mid ah Xildhibaanada Golaha deegaanka oo dhankooda boogaadiyey dadaalka Maamulka iyo Dhaqaatiirta Isbitaalka wadaan.
Gudoomiyaha degmada Warsheekh Xasan Maxamed Axmed ayaa sheegay in fadhiyada ugu horeeya ee golaha uu yeelan doono looga hadli doono baahiyaha Caafimaad ee ka jira degmadaas.
Ugu dambeyn Gudoomiyaha degmada Warsheekh Xasan Maxamed Axmed ayaa sido kale sheegay in uu koormeer ku sameeyey Maxkamada degmada iyo xarumaha ciidanka degmada, dhammaan xarumahaas waxaa ka socda howlo aad u wanaagsan.
Degmada Warsheekh ayaa ka mid ah degmooyinka ugu Ammaanka fiican degmooyinka Gobobolka Shabeelaha Dhexe halkaas waxaa ka howgala Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Dowladda oo Diyaarineysa Ciidamo gaar ah oo ilaaliya Xeebaha Dalka